TAROM resumes Budapest to Bucharest flights from Budapest Airport | Airline News
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » I-TAROM iphinda iqale iBudapest ukuya kwiBucharest iinqwelomoya ezivela kwisikhululo senqwelomoya saseBudapest
I-TAROM iphinda iqale iBudapest ukuya kwiBucharest iinqwelomoya ezivela kwisikhululo senqwelomoya saseBudapest
Isikhululo senqwelomoya saseBudapest samkela inkonzo kathathu kaTAROM ngeveki ukuya eBucharest, eRomania ikhonkco lakutshanje lokubuyela kwinethiwekhi yendlela yesango.
I-TAROM iphinda iqale kathathu ngeveki ukuya eBucharest isuka eBudapest
I-TAROM isebenzisa izihlalo ezingama-72 ze-ATR72 kwindlela yeBudapest-Bucharest
IBudapest iya kuphinda ikwazi ukubonelela ngeenqwelomoya kwiziko lezorhwebo laseRomania
Njengokuba isikhululo seenqwelomoya saseBudapest siqhubeka kwindlela yokuvula inethiwekhi yendlela, ikhonkco lakutshanje lokwenza ukubuyela kwakhona kwamkelekile TAROMInkonzo ephindwe kathathu ngeveki ukuya eBucharest.
Usebenzisa umkhosi wenqwelomoya ophethe izihlalo ezingama-72 ze-ATR72s kwicandelo leekhilomitha ezingama-616, iBudapest iya kuphinda ikwazi ukubonelela ngeenqwelo moya kwiziko lezorhwebo laseRomania.
"Kumnandi ukuba iTAROM ibuye inqwelomoya ngenqwelomoya yaseRomania," utshilo uBalázs Bogáts, iNtloko yoPhuhliso lweeNqwelo moya, Isikhululo senqwelomoya saseBudapest.
“Njengokuba izithintelo zokuhamba ziqala ukuthamba, singqina ukwanda kwebango kwiindawo ezahlukeneyo uthungelwano lwethu olwaziwayo. Siyazingca ngokusebenzisana namaqabane ethu eenqwelo moya ukuze sidibane nazo zonke iindawo ebesidibene nazo ngaphambili, kwindawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo. ”
I-TAROM yiphathi yeflegi kwaye indala ngoku isebenza ngenqwelomoya eRomania, ese-Otopeni ngaseBucharest. Ikomkhulu layo kunye nehabhu layo eliphambili likwisikhululo senqwelomoya saseHenri Coandă.